“मैले मातालाई भित्तोमा राख्न सकिन, मनको भित्तोमा भने मज्जाले सजाएँ”;अबिसेक डाँगी « Daily News Bank
“मैले मातालाई भित्तोमा राख्न सकिन, मनको भित्तोमा भने मज्जाले सजाएँ”;अबिसेक डाँगी
काठमाडौं :- “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी” “कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति” हिजैदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा बारम्बार फोटाहरु प्रदर्शित हुँदैछन, सुरु भइसके । मैलेपनि सम्झेँ भोलि मातातिर्थ औँशी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन रहेछ भनेर । सोचेँ, अघिल्लैदिन आमाहरुको यतिविघ्न प्रचार गरिएको छ, भोलिसम्म पुग्दा झन के होला ? । नभन्दै भोली आइसक्यो, त्यो दिन आजै हो ।
बिहानको करिब ५ बजे खोलिएको त्यो सञ्जालको प्रवाह देख्दा लाग्यो आमा सम्झने नयाँ शैलीको भड्किलो विकास भएको रहेछ । समाजमा हिरो, लेखक र बिक्ने चिजको प्रचार हुन्थ्यो । हुँदा-हुँदा आमाको प्रचार गर्न थालिएछ, धिक्कार छ मलाई । किनकी मैले हालेको छैन, आमा विर्सेजस्तै भएको छु अरुको नजरमा । सबै आमाहरुलाई नमन् । भित्तोहरु हजारौँ आमाहरुले भरिएको थियो । जीवित आमादेखि स्वर्गवासमा रहनुभएका आमाहरुको मिठो सम्झना गरिएको थियो । मृत आत्माको सम्झनामा आमा शब्दको प्रयोग सहि मान्नैपर्छ । तर, जीवित देवीको दर्शन सञ्जालका माध्यमबाट प्रस्तुत हुनु शब्दको अर्थमा भएको बेप्रयोग मान्नुपर्ने मेरो मनले बतायो । आमाको प्रचार शैली आवश्यक देख्दीन म । कुनै माध्ययममा ल्याउने बस्तु पनि होइन, आमा । आमा जननी हो, आमालाई जति वर्णन गरेपनि शब्दहरु अपुरै हुन्छन् । यी शब्दहरु लेख्दैगर्दा एकपटक सोचेँ, म आजबाट धेरैको फेसबुके र लिङ्कडइनबाट आउट हुनेछु । ती साथीहरुबाट फरक दायराभित्र पर्नेछु, चिन्हारी गलत बजारमा छरिने छ । सब कुरालाई पर्बाह नगरि लेख्न वाध्य भएँ । सँसारका आमाहरु मलाई माफ गर्नुस मैले हजुरको बिरोध गरेको होइन ! सम्मानमा फेरिएको बिकृति विरुद्ध लेखेको हुँ । आमा तपाइँलाई बजारमा छरेका छन् त्यसले तपाइँलाई चोट पुर्याएको छ । चित्त दुख्यो र लेख्न वाध्य भएँ, मलाई माफ गर्नुस् । हुन त आमा यहाँ मरेको लासमाथि सेल्फी हान्दै पोष्टपनि गर्छन यहाँ, भन्नुस म के भनौँ वहाँहरुलाई अनि यो भड्किलो शैलीलाई । अर्थ खोज्छु ! आफूलाई जन्मदिने स्त्री, जननी, माता, महतारी जसको न्यानो काख । भन्ने गरिन्छ “आमाको काख, अरुको लाख” । बैशाख कृष्णपक्षको औँसी, शास्त्रमा बुबाको भन्दा आमाको स्थानलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको पाइन्छ । श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरिएकी आमाबाट अझ बढी प्रगति र शान्तिको लागि आशिर्वाद थाप्ने दिन आज । बहुमुल्य दिन हो आज, कहिल्यै नसम्झनेले पनि आजको दिन सम्झन वाध्यै हुन्छन् । आजकै दिन देशभरका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुमा ठुलो मेला नै लाग्ने गर्छ । यस्तो छ लेखिएको र गरिएको आमा शब्दका पहिचानहरु । तर, बढ्दो बिकृतिले आमा शब्दको ग्लेमरलाई बढवा दिएको छ जसको कुनै आवश्यकता नै छैन । आमाको सम्मान गर्ने शैली फेरिएको देख्दा आँशुझार्न वाध्य भएँ । सम्झेँ फेसबुके प्रचारले आमा प्रतिको माया र सम्मान होला ? उनको स्थान यत्ति नै हो त ? । यवात कुरा खेलाउँदै जाँदा एकपटक आ… ठोकिदिउँन त भित्तोमा भन्ने कुतकुति पनि नलागेको होइन । तर, पूनः सोचबिचार गरेरै भित्तोको प्रयोग गरिन । यसको लागि सरी आमा ।
आमालाई भित्तोबाट होइन मनबाटै सम्मान गर्ने निधो गरेँ, यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेँ । आमालाई भेट्न सकिन मैले यो लक डाउनले गर्दा तर सम्मानस्वरुप ५ बजे नै फोनको कि दबाएर “हेल्लो आमा, सञ्चै हुनुहुन्छ ? आज आमाको मुख हेर्ने दिन सम्झेको” । त्यहि समय दुईचार बात पश्चात मैले आमालाई सम्झेँ । दीर्घ र निरोगी जीवनको प्रार्थना गरेँ । त्यसपश्चातपनि मैले मातालाई भित्तोमा राख्न सकिन, मनको भित्तोमा भने मज्जाले सजाएँ । मान्यता अुनसार आज छोराछोरीहरुले आमालाई मिठोमिठो खानेकुरा ख्वाएर उपहार दिइ आमाकोे मुख हेर्ने चलन छ । विभिन्न कारणले टाढा भएका छोराछोरीले समय निकालेर भएपनि आमालाई भेट्ने गर्दछन् । यस्तै आमा नहुनेले देशका विभिन्न नदी तथा धार्मिक स्थलहरुमा पुगेर स्नान गरी मातृहरुको नाममा श्राद्ध गरी तर्पण दिइ सिदा दान दिने गर्दछन् । कसैले तिथिमा निरन्तरता दिएकाहरुले घरमै स्नान गरी सिदा दान गर्दछन् । जति नै सम्बन्ध बिग्रिएपनि जन्मदिने बुवा–आमा कुनै छोराछोरीको लागि काखा र पाखा हुन सक्दैनन् । सोच नराम्रो छोराछोरीकै हुन सक्छ तर बुवा–आमाले आफ्ना सन्ततीको कहिल्यै हुँदैन । यसकारण जुन कोणबाट सम्झेपनि आमाप्रतिको छोराछोरीको सम्झना अपुग नै हुन्छ । यसको मतलव् मायाँ जति गरेपनि आमाको कोख र मुल्य कुनै तरिकाले तिर्न सकिँदैन ।
यो एकदिनको सानो पर्व भएपनि सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाई हृदयको ममतालाई नजिक बनाउन सकेको पक्कै छ । आमा ! लेखेका कुरामा गल्तिले बास गरे होलान्, यदि यो कुरा भूल भए क्षमा गर्नुहोला । तपाइँ सृष्टिकर्ता हौ । सम्मानमा मैले बढेको उत्तेजक विकृतिको चर्चा गरेँ जसलाई रोक्नु जरुरी सम्झेँ । तपाइँलाई प्रचारको आवश्यकता छैन । यसले बदनाम गराउँदैछ भन्ने मात्र निजी बिचार प्रस्तुत गरेको हुँ । मलाई माफ गर्नुस् साथीहरु, कसैको चोट पुर्याउनलाई यो सन्देश दिन खोजेको पनि होइन । तर, माैसमको मात्र चर्चा गरेको हुँ मैले । शैलीमा बढेको कार्यले आमालाई तल्लो स्थानमा राखेको महशुष गर्दै छरिएका यी विचारलाई गम्भिर रुपमा प्रस्तुत मात्र गर्न सकेँ । त्यहि भएर आज दिनभर सामाजिक सञ्जाल नखोल्ने निर्णयपनि गरेँ । मलाई माफ गर्नुहोला । सम्पूर्ण आमाहरुलाई मेरो हृदयदेखि माया र सम्मान ।